ယိုင်နဲ့ခြင်းမှသည် ခိုင်ခံ့ခြင်းဆီသို့. . . | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ယိုင်နဲ့ခြင်းမှသည် ခိုင်ခံ့ခြင်းဆီသို့. . .
ယိုင်နဲ့ခြင်းမှသည် ခိုင်ခံ့ခြင်းဆီသို့. . .
Posted by Thint Aye Yeik on Jul 3, 2017 in Critic, Environment, History, My Dear Diary, Myanma News, Travel | 24 comments
july2ရက်နေ့။
အမြန်လမ်း မိုင်တိုင် ၂၂၀ကို
ဖြတ်တက်။ နေပြည်တော်ကို ဝင်။
ပြီးမှ ရန်ကုန်ကို တန်းတက်။
အဲ့ခရီးစဉ်မှာ. . .
ဖြတ် မောင်းရာမှာ. . .
ဘာ မြင်ခဲ့လဲ ဆိုတော့. . .
လုံခြုံစိတ်ချရခြင်း အလျဉ်း မရှိတဲ့
မကွေး-ကံပြား အထိက . . .
လမ်း ကောင်းမှကောင်း။ မြေပြန့်လမ်း။
ကံပြားကနေ မြို့သစ်မြို့အထိကလည်း မြေပြန့်လမ်းပဲမို့/ လမ်းကလည်း
ကြားက တောင်ကြောအထပ်ထပ်ကြား ရောက်ချိန်မှာတော့ လမ်းက ကျဉ်းသွားတာမှ ကားနှစ်စီး မျက်နှာချင်းဆိုင်မိရင် အရှိန်လုံးဝ သတ်ပြီး လမ်းဘေးချ
ဒီအထိ ပြသနာ မရှိပေမယ့် . . .
ဖြစ်ချိန်မှာ. . .
ထိုးကျသွားမှာ။ နက်ရှိုင်းလိမ့်မယ်လို့ ထင်ရတဲ့ သစ်တော ချောက်ကမ်းပါးတွေ။
အဲ့လို အကွေ့တွေမှာ အရှိန်လွန်ပြီး
ကျ,မသွားအောင်. . .ချောက်ကမ်းပါး
အစွန်းကို ကာရံထားပေးတာက. . .
ကားတစ်စီးရဲ့ အရှိန်ကို ဟန့်တားနိုင်ဖို့ မပြောနဲ့ စက်ဘီးတစ်စီး အရှိန်လွန်လာရင်တောင် အောက်ထဲ မကျအောင်
အဲ့လို အန္တရာယ်များတဲ့ အကွေ့တွေ
တွေ့ခဲ့ရတော့မှ. . .
ဟိုးးးတလောက ညမိုးချုပ်ကြီး . . .
မောင်းနှင်နိုင်ဖို့. . .
လမ်းပါလား လို့ မြင်မိပါတယ်။
ကဏ္ဍဘက်ကို ငွေတွေ ပိုသုံးပြီး
Dအစိုးရလက်ထက်မှာ. . .
ဒီလိုလမ်းအခြေအနေတွေကနေလည်း မကြာခင် ပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်
လို့တော့. . .
ဝါးလုံးတန်း အကာအရံနဲ့ အကွေ့အဝိုက်ဘေးက ချောက်ကမ်းပါး
ညာဘက်ရော ဘယ်ဘက်ပါ။ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ချောက်ပါ။
ချောက်ကမ်းပါးတွေဘေးမှာ အရံအတား Guardrail တွေ ခံထားနိုင်ရင် အကောင်းဆုံး…
ဒါပေသည့် ကိုယ်တို့မြန်တျန့်တွေက လူပြတ်ရင် အိမ်ကိုဖြုတ်သယ်မှာ …
”စနစ်ကြောင့် မဟုတ်”လို့ ကြွေးကြော်ပြီးတော့. . .
ကိုရင် အသက်နဲ့ရင်း ကားမောင်းနေတာမှာ.. အစိုးရကို အခွန်ဘယ်လောက်ဆောင်ဖူးလဲ..။ ဆောင်ပြီးပြီလဲ..။
ကားပိုင်ရှင်ကရော..။ တရက်..တလ..တနှစ် ဘယ်လောက်များ အစိုးရကိုပေးဖူးလဲ..။
ကားတွေ..ယာဉ်ပိုင်ရှင်တွေ… ဓာတ်ဆီ၊ဒီဇယ်ဆီတွေ… စတဲ့ ကား(ယာဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့) လုပ်ငန်းတွေကနေ..အခွန်ငွေဘယ်လောက်ရသလဲ..။
ရတဲ့ အခွန်ငွေကို.. ၁၀ပုံပုံ..။
၃ပုံကို.. လမ်း..တံတား.. စတဲ့ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်း.. အဆင်ပြေဖို့အတွက်.. လုပ်ပေးရကြောင်း..။
ဘယ်သူမဆို.. ♫ ♬ ♪
ကိုယ်တန်ရာပဲ… ရမယ်..။♭♫ ∮ ♪
ကျနော့်လစာထဲကနေ ဝင်ငွေခွန်လည်း ဆောင်ပါတယ်။ လမ်းတွေပေါ် တက်တာနဲ့ လမ်း တံတားကြေးလည်း ပေးပါတယ်။ မပေးပဲ မောင်း ပြေးတာ တစ်ခါမှ မရှိ။
လကုန်လို့ လစာထုတ်ရင် ဝင်ငွေခွန်(PIT)+
တရားဝင် တပ်ပြီ ဆိုတာနဲ့ကို
အခွန်တွေ နင့်နေအောင် ပေးပြီးပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်အပိုင်းကိုတော့ ကိုယ် တာဝန်ယူပါတယ်။
နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆောင်ရမယ့်အခွန်တွေကို ထမင်းဆိုင်မှာ ထမင်းဝယ်စားတာကအစ ဝင်ငွေခွန် လမ်းတံတားကြေး စသည်ဖြင့်
အဲ့ဒါတောင် စိတ်ချ လုံခြုံရတဲ့လမ်းနဲ့ မတန်သေးရင်တော့ မတတ်နိုင်။
ရှိသမျှ နိုင်ငံသားအကုန်က.. ပုံသဏ္ဍန်မျိုးစုံနဲ့… ဆောင်ရမှာ..။ အဲဒီဆောင်ငွေကို.. ၃ပုံပုံ..။ တပုံကို.. အင်ဖ/ာစ/ပ်ချာဘာညာသုံး။ တပုံကို.. ၀န်ထမ်းတွေလစာ၊ တပုံကို စုဆောင်းပြီး တခြားလိုတဲ့ဘက်ဂျက်တွေမှာချ..။ စသဖြင့်ပေါ့..။
တကယ်က.. အခွန်ဆောင်နေရတယ်ဆိုတာထက်… ကိုယ့်ကိစ္စတွေကို.. ကိုယ်ကမအားလို့.. လူငှားလုပ်ခိုင်းတယ်မှတ်ပါ..။
ကိုယ်က.. ငှားပြီး.. ခိုင်းထားတဲ့သူနာမယ်က.. အစိုးရ…တဲ့..။
သူကြီးပြောသလို ကိုယ့်အလုပ် လူငှား ခိုင်းသလို သဘောထားပြီး အခွန်ဆောင်တာတော့ ဟုတ်ပါရဲ့ ..
အရင် လူငှားတွေလို မဖြစ်အောင် တော့ သတိထားရမှာဘဲ..
ကြောက်နေရမဲ့ လူငှားတော့ မလိုချင်ဘူး..
ကိုယ်က ထိုက်သင့်တဲ့.. ပေးသင့်ပေးထိုက်တဲ့.. အခွန်ဆောင်ရမှာက တပိုင်း..
ကြောက်နေရမဲ့ လူငှားဖြစ်မှာစိုးလို့.. ဖြစ်နေလို့.. အခွန်မဆောင်ဆိုတာက.. လူလည်လုပ်တဲ့.. အကြောင်းပြချက်သာဖြစ်ကြောင်း..။
အမေရိကားတခွင်ပြဲစင်အောင် ကားလျှောက်မောင်းရင်.. ဘာတွေတွေ့ရသလဲဆိုတော့…
အိမ်နားကနေ.. ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာဖက်ဆင်းတဲ့အခါ.. စင်တာမော်နီကာတောင်တန်းဆိုတာကြီးကို ဖြတ်ထွက်ရတယ်..။
လမ်းကတောင်တက်/တောင်ဆင်းလမ်း..။ ကွေ့ကာဝိုက်ခါနဲ့.. မောင်းရတာမှာ.. ညဆိုလမ်းမီးမရှိပေမယ့်… ချောက်ဘေးမှာ အကာတွေအထပ်ထပ်.. ရောင်ပြန်တွေလှလှနဲ့.. နောက်ကားကျော်ချင်ကျော်လို့ရအောင်.. တချက်တချက်.. ရှေ့အနှေးကားခဏဖယ်ဖို့.. ၂လမ်းသွားလေးတွေတောင်ပေးထားသေး..။ အေးဆေးမောင်းလို့ရတယ်..။ ချောထွက်သွားရင်တောင်.. အကာသွားတိုက်မှာကိုး..။
ကားအသွားအလာသိပ်မများပေမယ့်.. ပြည်နယ်က ငွေရှိချမ်းသာတယ်..။ ဆိုင်ရာ မြို့နယ်က.. ချမ်းသာတယ်.. ဆိုတာမို့.. စိတ်ချ လုံခြုံရတဲ့လမ်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားနိုင်တာပေါ့..။
ရဲလိုးစတုန်းဆိုတဲ့ နေရှင်နယ်ပါခ့်က ၀ါယိုးမင်းပြည်နယ်မှာရှိတာ..။
အဲဒါ အဲဒီကမ္ဘာကျော် ရေပူစမ်းတွေရှိရာ ကားမောင်းတော့.. အဲဒီပြည်နယ်ကို ..အရှေ့ဖက်ကနေ၀င်လာတာ.. ချောက်တွေလမ်းဘေးမှာရှိရက်နဲ့.. ဘာအကာမှမရှိတာတွေ အများကြီး..။ ပြုတ်ကျ.. အသက်တောင်ဘယ်နားကထွက်မယ်မသိ…။
ပါခ့်ထဲမှာလည်း.. တော်တော်များများ.. ဒီအတိုင်း..။ မတော်ကားချော်ဆင်းသွားရင်.. ဘေ့စ်ဖျော်ရည်ထဲစိမ်ပြီးသားနဲ့.. ကားရောလူရောပျောက်သွားမှာကို.. အန္တရာယ်သတိပေးဆိုင်းဘုတ်လောက်ပဲထားတာ..။
ပြည်နယ်က.. မချမ်းသာသမို့.. ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်..။
ပြောရရင်.. ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ.. ပြည်နယ်ခွန်ဆောင်ရတာက.. အမေရိကပြည်တခုလုံးထဲ အများဆုံးထဲပါတယ်..။
နေသူတွေ.. အခွန်များများဆောင်တော့.. ပြည်နယ်မှာငွေရှိ..။ ငွေရှိတော့.. လုပ်ပေးနိုင်သပေါ့..
အမေရိကားက… တချို့သူဌေးကြီးတွေကျ.. သူတို့ပိုင်လမ်းအဖြစ်.. အစိုးရဆီလျှောက်ပြီး.. ကိုယ့်နာမယ်တပ်.. စာရိပ်စိုက်ပြင်ပေးတာလည်းရှိတယ်..။
မြန်မာပြည်သားတွေက.. မဆလရဲ့ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်အောက်ကြီးလာ..မွေးလာသူတွေအခြေခံစိတ်ရိုင်းရှိသမို့.. ဘာမဆို အစိုးရကလုပ်ပေးရမယ်ချည်းမှတ်တာ..။
ငွေပိုလေးများရှိရင်.. ဒါမျိုးတွေမှာ လှူရပေးရ.. မြုတ်နှံရမယ်ဆိုတာထက်.. အ၀ါပုဂ္ဂိုလ်တွေညာချလေမိပြီး.. နောင်ဘ၀အတွက်ချည်း စိတ်ကူးငွေလှူတာကိုး..။
ဒီလိုနဲ့.. တော်ကြီးဘုန်းတွေနဲ့.. ဘုရားကြီးက သူဌေးဖြစ်..။ အမျှ.. သာဓု.. ။
ကိုရင်သူရ.. နောက်နောင်.. အလှူငွေကို တည့်မတ်မှန်ကန်စွာ… လှူနိုင်ပါစေသတည်း..။ သာဓု..။ အမျှ..။
သစ်မရခင် ဝါးပေါင်းကွပ် တဲ့
ဝါးပေါင်းကွပ် ဆိုတာ ပေါင်းပြီး ဝါးကြတာကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး..
ဒါပေမဲ့ သူတို့က အဲလို ဘာသာပြန်ကြသလား..
အခု အစိုးရမှာ အရင် အဘတွေလို ပိုးစိုးပက်စက်
ဝါးနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းကြီး ရှိမနေပါဘူးဗျာ။
အဲ့လမ်းဖြတ်ခ တစ်ပြားမှ ဆောင် ရသည်မထင် … ဖြတ်တဲ့ ကားလဲ မရှိသလောက်
အခု အစိုးရ သဘောကောင်းချက် .. ရှိတဲ့လမ်းကြေးတွေဖြုတ် …ကြည့် ရတာ ချေးလို့ ရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ နဲ့လမ်းတွေဖောက်မယ်ထင်ပါ့ ..
လမ်းကြေးတွေ ဖြု တ်လိုက်လို့လဲ ကုန်ဈေးနုန်းတွေက ကျတာမဟုတ် ..လူပြိန်းကြိုက်အောင်လုပ်တော့ လမ်းခတော့ လမ်းတော်တော်များများမဆောင်ရတော့ဘူး ..အတင်းကောက်တဲ့ မြို့ဝင်ကြေးဘဲ ပေးရတဲ့ နေရာပေးရတုန်း
ဖြစ်သင့်တာက ကောက်လို့ ရတဲ့ လမ်းကြေး လေလံပစ်တဲ့လမ်းကြေး မှန်မှန်ကန်ကန် နဲ့ အစိုးရ အိပ်ထောင် ထဲ ရောက်အောင်ဝင်အောင် လုပ်၇မှာပါ ..
ပြီးခဲ့တဲ့လထဲ ရန်ကုန်.နေပြည်တော်ကနေ ပင်လောင်း လွိုင်ကော် အင်းလေး တက်သွားတာ ရန်ကုန် နေပြည်တော် အထိသာ လမ်းကြေးပေးရပြီး အင်းလေး ရောက်တဲ့ အထိ တစ်ပြားမှ ထပ်မပေးရ …လွိုင်ကော် အင်းလေး ၇၂ မိုင် မှာ တစ်ဝက်လောက် ကတော့ ကျောက်လမ်းဘဲ ရှိသေး … ဘယ်က ပိုက်ပိုက်နဲ့ လမ်းလုပ်မယ်တော့ မသိ
ပုံထဲက အတိုင်းဆိုရင်တော့ အခြေအနေအများကြီးကောင်းပါတယ် ..မန္တလေး တောင်ကြီး ကို ရွာငံ လမ်းပိုင်းကတက်ရင် အရင်ကအဲ့တာထက်ဆိုးသေး ..လမ်းကကျဉ်း ဘေးက ချောက် နဲ့ ..ခုလို လမ်းပုခုံးသားက မရှိ .. ခုတော့အကြီးအကျယ် လမ်းချဲ့နေလေရဲ့ ..တစ်ချိန် ဒီလမ်းလဲ ဒီလိုဘဲ ချဲ့ လာပါလိမ့်မယ်.. လောလောဆယ်တော့ အသုံး မများပါဘူး …
မကွေးအထွက်-ကံပြားကနေ နေပြည်တော်ဘက် မောင်းလာရာမှာ အမြန်လမ်း(မိုင်တိုင် ၂၂၀)အတက်မှာ လမ်းကြေး စောင့်ကောက်တဲ့ဂိတ် ရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက် သွားတာက ကားအသေးမို့ ၅၀၀ ကောက်ပါတယ်။
အရင်တစ်ခေါက်က Alphard နဲ့ သွားတာ တစ်ထောင် ကောက်ဖူးပါတယ်။ ကားကြီးရင် ကြီးသလို ၂၀၀/၂၅၀၀လောက်ထိ ကောက်နေပါတယ် လေးလေးကထူးဆန်းရေ။
လမ်းက သတိထားပြီး မောင်းရင်တော့ ဘာမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ တချို့ ကသမ်းကရမ်း မောင်းတဲ့သူတွေအတွက်တော့. . . တော်တော် လုံခြုံမှု မဲ့ပါတယ်။
Right ,အဲ့ ဒါက အမြန်လမ်း အတွက် ကောက်တာ …
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပြင်ွားမယ့်တော့ထင်မိတာပါ ပဲ ကျတော်တို့ပြင်ဦးလွင် မန္တလေးလမ်း ဆို ပြင်ထားတာ တော်တော်ကောင်းနေပြီ ?
ဟုတ်တယ် အတွေးလေးရေ။ တချို့နေရာတွေ အတော်ကောင်းနေပါပြီ။ ဒါမယ့် ခက်တာက ကောင်းတာကျ အသံ သိပ်မထွက်လာပဲ ဆိုးနေတာလေးတွေချည်း ပောကြတာ များနေတယ်။
အင်း ဖေဖေဆုံးပြီးထဲက ခရီးေးမသွားဖြစ်တော့တာ အတော်ကြာပါပြီကော… လမ်းပန်းအခြေအနေလည်းမသိရတော့ ခုလိုဗဟုသုတလေးတွေ ဖတ်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ..
ကျနော်ကတော့ ခရီးတွေ အသွားများတော့ တွေ့ရကြုံရတာတွေ များပြီး ပြောပြချင်တာတွေ များလာတယ်
ဒါမယ့် စာရေးဖို့ အချိန်က မရ
မလေးကို ပထမအခေါက် အောက်လမ်းကနေသွားတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံထဲကို ပစ်ကပ်ကားတွေနောက် ငပိသိပ် ငချဉ်သိပ် မိုးကာအုပ်ခံပြီး
စီးသွားရတာ။ ငြိမ့် နေတာပဲ
ထိုင်းနယ်စပ်ကနေ မလေးထဲကို ညပိုင်းမှာ ခိုးကူး။
ဟိုအထဲရောက်တော့ကားသေးသေးလေးတွေနဲ့ လာကြိုတယ်။
အဲ့တညလုံး မောင်းရောပေါ့ ဗျာ။
မောင်းဆို တောရွာလမ်းလေးတွေကနေပေါ့ ။
အဲဒီမှာ ဘာစတွေ့ ဖူးသလဲဆို …
နက်မှောင်လှတဲ့ကတ္တရာလမ်းမကြီးရယ် လမ်းအလယ်ခေါင်က
ရောင်ပြန်ကြောင်မျက်လုံးနဲ့မျဉ်းဖြူ။
ဘေးဝဲယာနှစ်ဖက်က အကာဘားတန်းကြီးတွေနဲ့တလက်လက်ရောင်ပြန်
ပြားလေးတွေ။ လှချင်တိုင်း လှနေတော့ တာ။
ကိုယ်က တောသားဆိုတော့ဒီလိုမမြင်ဖူးတဲ့အလှတွေကို ခံစားလိုက်တာ
ပွဲစားအိမ်ရောက်သွားတာတောင် မျက်စိထဲက မထွက်။
ပြားလေးတွေ။ လှချင်တိုင်း လှနေ…..
အမြန်လမ်းမှာလည်း တချို့ လမ်းပိုင်းတွေမှာ အဲ့လောက်နီးနီး လှတော့ လှသား။
ဒါမယ့် လမ်းတလျှောက်လုံး လှဖို့ကတော့ နောက် ဆယ်နှစ်လောက် စောင့်ရအုန်းမလားပဲ
မျှော်လင့်တာတွေက မျှော်လင့်ထားချိန်မှာ ဖြစ်မလာပဲ….
မမျှော်လင့်ထားတာတွေက ဖြစ် ဖြစ်လာနေတာ…